Réponses pour «mpitandrina»:
malagasy how satan stops our prayers 83%
Nampiasain’i satana io lehilahy io hamotika sy handrava fiangonana maro dia marosy hanimba fiainana mpitandrina.
Gazety fevrier 2019 81%
Ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy 2 Gazety Tantely Febroary 2019 www.fjkmambohitantely.org Alahady 10 Febroary 2019 Laharana faha:
SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 69%
RAKOTOARIMANANA Milson, Mpitandrina Mpitsara : RAZAFINIARIVO Fidison Maxime, Mpitandrina Mpanolotra :
ZIONA VAOVAO TANTARA 68%
« Nitety ny ray amandreninay 22 mianadahy eo amin’ny sary àry ny Mpitandrina tany amin’ny voalohandohan’ny taona 1954, hoy izy mahatadidy, nizara ny fikasany hanangana Chorale.
FIRAKETANA TILY MAITSO 65%
(Mpitandrina, Pastora, Presbytera,Pasteur) MOMBA NY FIVONDRONANA :
+33 (0)4 37 65 38 01 5, Lalana Rabary Mpitandrina (tohiny) Ankadivato 101 Antananarivo - Madagascar Tel.
TADY LAHARANA 186 53%
Ary dia nanohina fatratra ny Mpitandrina sy ny Birao ary ny mpinon= ny Fjkm ao Gland ny tatitra nataon=ireo solontenany raha nizara ny fizotry ny Alanonana@ teto Soama rizareo.
RAKOTONAVALONA Maholy Mpitandrina EDITORIAL « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin’nyf ahamarinana .
Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed 35%
Koa satria efa mitsoka sahady ny rivotry ny Noely ary hivalona tsy ho ela iÿ taorua diatina, dia ffiliana ho anay mianakavy ny miarahaba sahadY, ny Mpitandrina miunakary, ny ekipan'ny TADY ary ny ntpianakovin'i Soamanandrariny tsy an-kanavuka :
Article GBUT n°02 2014 33%
“moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?” Aza mihevitra ny rahalahinao ho lehibe amin’ny zavatra rehetra ianao satria ny tsirairay dia samy manana ny fahalemeny avy, eo ihany koa ny zana-tsipika alefan’ilay ratsy entina handavoana antsika kristianina isan’andro.
Ny Baiboly - ( Tenin'Andriamanitra ) 31%
moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?
Manana sata mahaolomboahosotra ny Paşįtếra sy ny Apôşįtốly ary ny mpitandrina, ...,.